Xisbiyada Mucaaridku way quusteen | Somaliland Today
← MA RABTAA INAAD GUURSATO XAASKII KOWAAD AMA LABAAD
Cige iyo Caraale: Xaabsade iyo Hasha labada geel jecel →
Xisbiyada Mucaaridku way quusteen
Waxa u cad oo ay hubaan xisbiyada mucaaridku inayna doorasho kaga guulaysan karin madaxwayne Siilaanyo. Sababtoo ah waxay ogyihiin halka Siilaanyo u taagan yahay ummadda Somaliland. Waxay ogyihiin in aan taariikhda dunida hore loo arag nin dalkiisa xoog kaga xoreeyey gumaysi, kadibna nogday madaxwayne horseed u noqda horumarka dalkiisa oo doorasho lagaga guulaystay. Inuu iskii uga fadhiisto ama mowdku ka qaado mooyee.
Bilihii hore waxay ku andacoon jireen muddo kordhis ayuu rabaa, mana oggolin, oo haddii labada gole ee ‘sharci’ dejintu muddada u kordhiyaan; aqbali maynu oo waxaanu samayn dawlad ku
meelgaadh ah. Bal ka warran caqligaa, akhriste. Markuu madaxwaynuhu caddeeyey inaan doorashada dib loo dhigayn, ayay mucaaridkii jiq ku noqotay: Waar haddaba maxaan yeelaa? Doorasho lacag badanina way inagaga bixi, dayn badanna waynu ku geli, kuna guulaysan maynee.
Waxay maalmahan dambe la soo baxeen hadallo saxaafadda ay la dhex marayaan oo ku sheegayaan in uu madaxwaynuhu ka noqday musharraxnimadii Kulmiye ee madaxwaynenimo!!!!
Alla jeclaan lahaayeen sidaa hadday noqon lahayd!! (annagu shicib ahaan waxaan rumaysannahay beeninta hadalkaa ee dawladda). Iyadoo xataa la hubo inayna KA guulaysan karin hogaamiyayaasha kale ee kulmiye ee umadda magaca ku leh sida Muse Bixi, Wasiir Samaale iwm. Waxayse rajaynayaan haddii Siilaanyo musharaxnimada iska daayo in kulmiye dhexdooda is qabsan doonaan oo kala jabi doonaan, taasina iyaga fursad siin doonto.
Xisbiyada mucaaridka xaalkoodu markaa waa riyo, hammi muqayil, carqaladayn, ceebayn madaxda dawladda iyo ka been sheegid, qabyaalad iyo qaraabakiil. Waxa ka maqan inay la yimaadaan barnaamij cad oo ku lafa gurayaan waxay soo kordhin lahaayeen iyo waxay dadka Somaliland guud ahaan tari lahaayeen. Mucaaridku qorshe siyaasadeed malaha, ee kursiga uunbaa u muuqda oo xataa kamay fikirin haddaad ku fadhiisato kursiga maxaa ka dambeeya……..
Ayanle Amir <ayanle_60@hotmail.com